Boqolka Sanadood Ee Soo Socda Aanu Lacagtiisa Kala Bixino- Jamaahiirta Arsenal Oo Falcelin Xun Ka Sameeyay Markii Magaca Kooxooda Neymar Lagu Soo Qaaday.. - Gool24.Net
Boqolka Sanadood Ee Soo Socda Aanu Lacagtiisa Kala Bixino- Jamaahiirta Arsenal Oo Falcelin Xun Ka Sameeyay Markii Magaca Kooxooda Neymar Lagu Soo Qaaday..
Taageerayaasha kooxda Arsenal ayaa khaatin ka taagan mulkiilayaasha kooxdooda Gunners ee caadaystay in ayna la soo saxiixan nooca ciyaartoyda ay u baahan yihiin si ay kooxaha waa wayn ee Yurub iyo England ula tartai karaan.
Iyada oo Arsenal ay xagaagan waxyaabo kaftan lagu sifeeyay ka soo samaysay suuqa kala iibsiga waxaa soo baxay war ay adag tahay in la rumaysan karo kaas oo Arsenal la xidhiidhinaya xidiga in uu PSG ka baxo doonaya ee Neymar jr.
Markii ay taageerayaasha Arsenal warkan maqleen waxaa ka lumay hadalkan waxayna sheegeen in fikrad ahaan ay kooxdooda 100 sanadood oo kale ku qaadan karto in ay la soo saxiixan karaan ciyaartoy sida Neymar Jr oo kale ah.
Kadib markii uu wargayska Les Parisiens bil ka hor shaaciyay in Neymar Jr uu ka baxayo PSG, waxaa maalinba maalinta ka danbaysa soo baxayay warar dheeraad ah ilaa ugu danbayn ay PSG si rasmi ah ugu dhawaaqday in xidiga reer Brazil uu kooxdeeda ka bixi karo xagaagan.
Taageerayaasha kooxo badan oo Yurub ah ayaa jeclaan lahaa in ay kooxahoodu la soo wareegaan Neymar Jr laakiin jamaahiirta Gunners ayaan iyagu aaminsanayn in ay xataa hawaysan karaan Neymar Jr iyo ciyaartoyda magaca leh sababtoo ah waxay ogyihiin gacanta maamulka kooxdooda.
Mid ka mid ah taageerayasha Arsenal ee u qaadan waayay warka sheegaya in kooxdooda lala xidhiidhinayo Neymar jr ayaa soo qoray fariin cadayn buuxda u ah rajada dhimatay ee ay mulkiilayaasha kooxooda ka qaadeen.
Taageeraha Arsenal ayaa soo qoray: “PSG, miyaanu 222 mlyan ku maal galin karnaa 100 sanadood ee soo socda?”. laakiin taageere kale oo Gunners ah ayaa soo qoray in kooxdooda ay ku qaadan karto kun sanadood oo kale in ay heshiis noocan oo kale ah gali karto.
Taageere kale ayaa sheegay in 20 ka milyan gini ee uu Neymar Jr aabihii dilaalka u qaadanayaa uu ka badan yahay uu ka badnaan karo lacagta ay kooxdoodu toban sano suuqa galinayso.
Taageerayaasha Arsenal ayaan xataa aamini karin in magaca kooxdoodu lagu soo hadal qaado Neymar Jr oo ah xidiga taariikhda kubbada cagta aduunka ugu qaalisan.
Waxay jamaahiirta Arsenal arkayaan kooxdooda oo haddaba ciyaartoy lala xidhiidhinayo balse diraysa dalabyo kala badh ka ah qiimaha ay kooxaha ay ka tirsan yihiin ku doonayaan.
Tusaale ahaan Arsenal ayaa 40 milyan gini ku dalbatay Wilfried Zaha oo ay kooxdiisa Crystal Palace ku doonayso 80 milyan waana arinta niyadjabka badan ku keenaysa taageerayaasha Gunners.
Si kastaba ha ahaatee, warka sida lama filaanka ah loogu sheegay in Arsenal ay xiisaynayso Neymar Jr ayaa qosol iyo amakaag ku abuuray taageerayaasha Gunners ee og waxa ay mulkiilayaasha kooxdoodu suuqa ka samayn karaan.